आशिष गर्ग | गृहपृष्ठ
Home आशिष गर्ग
कार्यकारी निर्देशक, सेण्ट्रल पार्क
पूर्णघरको चाहना गर्नेलाई सेण्ट्रल पार्क राम्रो उपहार हो
यो वास्तवमा विश्वव्यापी सोच हो । अहिले विश्वको तापक्रम बढिरहेको छ । योलगायत विभिन्न वातावरणीय समस्या पनि देखिदै गएका छन् । यी सबै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै वातावरणमैत्री भवन निर्माण गर्न लागिएको हो । अहिले विश्वभर यस्ता भवन निर्माण गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । भारतमा पनि अहिले सरकारी भवनहरू निर्माण गर्दा निश्चित वातावरणीय प्रविधिहरूलाई ख्याल राख्नुपर्ने नियम छ ।
सेण्ट्रल पार्क कस्तो किसिमको परियोजना हो ?
सेण्ट्रल पार्क निर्माणको परिकल्पना करीब ३ वर्षअघि गरिएको हो । त्यसबेला क्लिन डेभलपर्सले वातावरणमैत्री निर्माण परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको थियो । डेभपलर्सले विभिन्न क्षेत्रमा वातावरणमैत्री अन्य परियोजना पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । सोहीअनुरूप सेण्ट्रल पार्कको निर्माण कार्य शुरू गरिएको थियो । यसमा हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजरका रूपमा क्लिन इनर्जी डेभलपमेण्ट बैङ्क रहेको छ । यो परियोजना विशेषतः ‘इनर्जी सेभ’ गर्ने किसिमबाट निर्माण गरिएको छ । सेण्ट्रल पार्क काठमाडौं चक्रपथ क्षेत्रभित्रको सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । यो कुल १८ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसअन्तर्गत चारओटा टावरको निर्माण गरिएको छ । बेसमेण्टसहित सबै टावर १६ तलाका छन् ।
भवन निर्माण गर्दा पनि वातावरणमैत्री हुनुपर्छ भन्ने सोच कहाबाट आयो ?
यो वास्तवमा विश्वव्यापी सोच हो । अहिले विश्वको तापक्रम बढिरहेको छ । योलगायत विभिन्न वातावरणीय समस्या पनि देखिँदै गएका छन् । यी सबै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै वातावरणमैत्री भवन निर्माण गर्न लागिएको हो । अहिले विश्वभर यस्ता भवन निर्माण गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । भारतमा पनि अहिले सरकारी भवनहरू निर्माण गर्दा निश्चित वातावरणीय प्रविधिहरूलाई ख्याल राख्नुपर्ने नियम छ । नेपालमा पनि यस्ता भवन निर्माण हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसबाहेक ग्राहकले नयाँनयाँ कुराहरू खोजिरहेको हुन्छ । सेण्ट्रल पार्कले त्यो कुरा उपलब्ध गराउँछ । सेण्ट्रल पार्कलाई यस खालको प्रविधिअनुरूप निर्माण गर्न हामीले विश्वप्रसिद्ध विभिन्न निर्माण क्षेत्रका कम्पनीहरूसँग पनि सहकार्य गरेका छौं ।
तुलनात्मक रूपमा सेण्ट्रल पार्कका अपार्टमेण्ट महँगा होइनन् र ?
जुन सोचअनुसार हामीले भवन निर्माण गरिरहेका छौं, पक्कै पनि यसको निर्माण लागत बढी छ । काठमाडौंको जनसङ्ख्याअनुसार अहिले घर निर्माण हुन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा मानिसहरूले पानी, ढल, सुरक्षालगायत आधारभूत कुरा पनि उपभोग गर्न पाएका छैनन् । तर, सेण्ट्रल पार्कले सरकारले दिनुपर्नेबाहेकका सुविधा पनि दिइरहेको छ । अर्कोतिर हाम्रो परियोजना दिगो विकासलाई लक्षित गरेर बनाइएको छ । हाललाई यो महँगो देखिए पनि भविष्यमा यसले धेरै कुराको बचत गर्छ । मेरो विचारमा काठमाडौंमा अहिले पनि आवश्यकताअनुसार अपार्टमेण्टको निर्माण हुन सकिरहेको छैन । एउटा पूर्णघरको सुविधा र उपलब्ध सानो क्षेत्रफलको सही सदुपयोगका लागि पनि अपार्टमेण्टको विकास हुनु आवश्यक छ ।
तर, बजारमा वास्तविक रूपमा प्रतिस्पर्धा हुन सकिरहेको छैन । मानिसहरू अपार्टमेण्टको भाउ घट्छ भन्ने मनोविज्ञान लिएर बसेका छन् । तर, राजनीतिक स्थिरता आएसँगै काठमाडौंमा अपार्टमेण्ट नपाउने समस्या हुन सक्छ । हामीले प्रयोग गर्ने निर्माण सामग्रीको भाउ पनि निरन्तर बढ्दो छ । यसबाहेक निर्माणका क्रममा विभिन्न क्षेत्रलाई पनि रकम दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, हामीले उपलब्ध गराएको सुविधा र प्रयोग गरिएका सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने महँगो भन्न मिल्दैन । अहिले काठमाडौंमा जग्गा खरीद गरेर घर बनाउनुभन्दा अपार्टमेण्टको खरीद गर्दा करीब आधा सस्तो पर्न जान्छ ।
अपार्टमेण्ट निर्माणका लागि चक्रपथभित्रको क्षेत्र नै छनोट गर्नुको कारण के हो ?
काठमाडौंमा बसोबास गर्ने मानिसहरू कामका लागि चक्रपथभित्र नै आउनुपर्ने हुन्छ । वित्तीय संस्था, सरकारी कार्यालयदेखि अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय यहीँ नै छन् । तर, चक्रपथबाहिरबाट आउनका लागि काठमाडौंमा अझै पनि व्यवस्थित रूपमा यातायात, सुरक्षालगायत अन्य संरचनाको विकास हुन सकेको छैन । साँझको ६ बजेपछि चक्रपथबाहिरका लागि यातायातको समस्या हुने गर्छ । यसका लागि हामीले उचित ठाउँका रूपमा विशालनगर क्षेत्रलाई छनोट गर्‍यौं । यहाँबाट काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा जान सजिलो पनि हुन्छ । शहरभित्र भए पनि अपार्टमेण्ट स्थल शान्त छ ।
सेण्ट्रल पार्क अपार्टमेण्टको लक्षित वर्ग कुन हो ?
अपार्टमेण्ट खरीद गर्नका लागि निश्चित वर्ग नै हुनुपर्छ भनेर हामीले तोकेका छैनौं । यद्यपि, हालसम्मको बूकिङ अवस्था हेर्ने हो भने कर्पोरेट क्षेत्र तथा सरकारी कार्यालयमा कार्यरत उच्चअधिकारीहरू बढी रहेका छन् । हामीले अपार्टमेण्टको नाम पनि ‘सेण्ट्रल पार्क प्रिमियम अपार्टमेण्ट’ भनेर राखेका छौं । यसकारण यो अपार्टमेण्ट विशेषगरी मध्यमवर्गलक्षित छ भन्न सकिन्छ ।
सेण्ट्रल पार्कको निर्माण कार्य कहा पुग्यो ?
सेण्ट्रल पार्कअन्तर्गत चारओटा टावर निर्माण गरिएको छ । यसमध्ये टावर ‘ए’को निर्माण कार्य करीब ९५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । निर्माण सम्पन्न गरी आगामी दशैंतिर ग्राहकलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा छौं । बाँकी तीनओटा टावर आगामी ७ महीनाभित्र हस्तान्तरण गर्ने गरी निर्माण कार्य हुँदै छ ।
मानिसहरूले सेण्ट्रल पार्कका अपार्टमेण्ट नै किन खरीद गर्ने ?
सेण्ट्रल पार्क अपार्टमेण्टको अवस्थिति यो खरीद गर्नुपर्ने मुख्य कारण हो । त्यस्तै, यसअन्तर्गत निर्माण भएका अपार्टमेण्टहरू वातावरणमैत्री छन् । एउटा घरका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुविधा अपार्टमेण्टमा उपलब्ध गराइनेछ । यहाँ स्वीमिङ पूल, हेल्थ क्लब, सभाहल, व्यवस्थित पार्किङका साथै पर्याप्त खुलाक्षेत्र छ । समग्रमा पूर्णघरको चाहना गर्ने जोकोहीलाई पनि सेण्ट्रल पार्क एउटा राम्रो उपहार हो ।